Niknayman: စင်ကာပူမှ မျိုးချစ်မြန်မာများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် Overseas Burmese Patriots (OBP) တို့မေးမြန်း ဖြေကြားချက်များ (ဒုတိယပိုင်း)။
စင်ကာပူမှ မျိုးချစ်မြန်မာများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် Overseas Burmese Patriots (OBP) တို့မေးမြန်း ဖြေကြားချက်များ (ဒုတိယပိုင်း)။
၁။ သန်းရွှေအမိန့်ပေးလို့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပစ်ခတ်ရိုက်နှက်တဲ့ စစ်သားတွေမှာ အပြစ်ထိုက် ပါသလား။ ထိုက် ခဲ့ရင် သာသနာအရ ဘယ်လို အပြစ်မျိုးပါလဲ။
ဖြေ။ နှစ်ဦးစလုံး အပြစ်ထိုက်ပါတယ်။ ထိုက်တဲ့ အပြစ်ကတော့ အတိအကျ သတ်မှတ်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အပြစ်တွေဟာ သာမန် လူတစ်ယောက်ကို သတ်မိတဲ့ အပြစ်ထက် ပိုကြီးလေးတာတော့ သေချာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရဟန်းတစ်ပါးခြင်းဆီမှာ သီလရှိ၊ မရှိ ဝေဖန် စမ်းသပ်လို့ ရပေမယ့် သံဃာမှာတော့ သီလရှိ၊မရှိ စမ်းသပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကျမ်းစာမှာတော့ "သံဃော ဟိ ဒုဿီလော နာမ နတ္တိ" လို့ဆိုပါတယ်။ သံဃာမှာ ဒုဿီလဆိုတာ မရှိဘူးပေါ့။ သံဃာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ သီလပြည့်စုံပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီသံဃာကို ပြစ်မှားသူတွေ ဟာလည်း သာမန်လူကို ပြစ်မှားတာထက် အပြစ် ပိုကြီး ပါတယ်။
ဘယ်လိုအပြစ်မျိုးလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ပြဖို့ ခဲယဉ်းသလို ဘယ်အချိန်မှာ အကျိုးပေးမှာ လည်း ဆိုတာလဲ သတ်မှတ်ပြဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဇောစေတနာ (၇) ပါးအကြောင်း နဲနဲရှင်းပြလိုပါတယ်။ ဇောစေတနာ (၇) ပါးက ......
(၁) ပထမဇောစေတနာ= လက်ရှိဘ၀မှာတင် အကျိုးပေး
(၂) သတ္တမဇောစေတနာ= ဒီဘ၀က ကွယ်လွန်ပြီး နောက်ဒုတိယဘ၀အကျိုးပေး
(၃) အလယ်ဇောစေတနာ ငါးချက်= တတိယဘ၀က နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ ဘ၀အထိ အကျိုးပေးဆိုပြီး ဇောစေတနာ ငါးချက် ရှိပါတယ်။
အခု န-အ-ဖ က လုပ်တဲ့ သံဃာတွေကို စော်ကားမှု အကုသိုလ်ဟာ ဘယ်ဇော စေတနာ ဖြစ်တယ်လို့ မသိနိုင်ပါဘူး။ အဲ ပထမဇော စေတနာသေချာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘ၀မှာ အမှန်မုချ အကျိုးပေးမှာပါ။ သတ္တမဇောစေတနာ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီဘ၀တော့ သူတို့တတွေ အဟောင်းစား အဖြစ်နဲ့ ကောင်း ကောင်းစားဦးမှာပါ။ နောက်ဘ၀ကျရင်တော့ အလှည့်ကျ မနွဲ့ကြစတမ်း ခံပေဦးပေါ့ဗျာ။ အေး နောက်ဘ၀တွေမှာလည်း ကုသိုလ်ကံ အရှိန်လေးရှိလို့ မခံစားရသေးရင်လည်း နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ ဘ၀အထိ တစ်ဘ၀၊ ဘ၀မှာတော့ ခံရမှာပါ။ ဘုရားရှင်တောင် ၀မ်းတော်လားတဲ့ဝဋ် စတဲံ့ ၀ိပါက်တော် (၁၂)ပါး ခံစားရသေးတာပါ။ န.အ.ဖလို သတ္တ၀ါတွေက ဘာမို့လိုလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ရင် ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေ ပြည့်စုံလောက်ပါပြီ။
၂။ ဆရာတော်ဘုရား သံဃာတော်များကို ရိုက်နှက်ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်သူများသည် အဘယ် ငရဲဘုံသို့ သွားနိုင်ပါသလဲဘုရား၊ သူတို့ကို ယင်းသို့ လုပ်ရန် အမိန့်ပေးသူများ အဘယ်ငရဲဘုံသို့ သွားနိုင်ပါသလဲဘုရား၊ သူတို့ နှစ်ဦးပြစ်ဒဏ်မှာ မည်သူ၏ အပြစ်ဒဏ်က ပိုကြီးနိုင်ပါသလဲဘုရား။
ဖြေ။ ရိုက်နှက်သူရော၊ အမိန့်ပေးသူပါ အပြစ်ရှိပါတယ်။ အထက်ကအဖြေကို မှီငြမ်းပေးပါ။
၃။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်တွေထဲမှာ သံဃာကို စော်ကားရင် ရိုက်နှက်ရင် မြေမျိုတယ်၊ ကပ်ဘေးဆိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကပ်ကြီးတွေ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ န-အ-ဖ က ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ကြုံနိုင်ပါသလဲဘုရား။
၄။ သံဃာကို သတ်ဖြတ်သော သန်းရွှေနှင့် အပေါင်းအပါများသည် မည်သို့သော အပြစ်မျိုး ထိုက်တန်ပါသလဲ၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပေးပါဘုရား။
ဖြေ။ နောက်မှ ရမယ့်အကျိုးတွေကတော့ မသိဘူး… ချက်ချင်းရတဲ့ အကျိုးကတော့... ရိုက်တဲ့သူဟာ လူရိုင်းဘ၀ရောက်သွားတယ်။ သတ်တဲ့သူဟာ လူသတ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်။ လာဘ်ယူသူဟာ လာဘ်ကောင် ပြိတ်တာ ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့စိတ်နဲ့ ရုပ်တွေမှာ အမာရွက် ထင်သွားတယ်။ ပြန်လည် ပြင်ဆင်မှု မရှိရင် မသေမချင်း မပျောက်တော့မယ့် အမာရွက်မျိုးပေါ့.. မီးထဲကို လက်ထိုးတဲ့သူဟာ မီးလောင်ဒဏ်ရာ အဖြူကွက်ကြီး ထင်သွားသလိုပေါ့။ သူ့အမူအကျင့် အတွေးအခေါ်တွေကို မပြုပြင် မချင်း အဲဒီအမာရွက် မပျောက်ဘူး။ ကျန်တဲ့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး နောက်ဘ၀မှဟာတွေကတော့.. ကိုယ့်အပေါ်လွန်ကျူးထားသူကို ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုတဲ့ ရန်ငြိုးနဲ့. ကိုယ်နည်းနည်း ကောင်းထားတာအတွက် အကျိုးကြီးကြီး လိုချင်တာတွေကနေ အခြေခံ လာတာလို့ ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ကတော့... န-အ-ဖ တွေကို ဖြုတ်ချဟေ့၊ ငရဲပြည်ပို့ကြဟေ့လို့ အော်မယ့်အစား ဦးသန်းရွှေတို့ လူတစ်စုကို ဘယ်လို ကောင်းလာအောင် ပြုပြင်ဆုံးမပေးရမလဲလို့ပဲ ပြောင်း ပြောပေးရမယ်ထင်ပါတယ်။ (နံပါတ် ၁-အဖြေနှင့် ပူးတွဲကြည့်ရန်)
၅။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တိုင်းတစ်ပါးတွင် ရှိနေသော နိုင်ငံတော် သံဃနာယက အဖွဲ့အစည်းများတွင် နိုင်ငံရေးအမြင် ကွဲပြားခြင်း ရှိပါသလား။
ဖြေ။ ဦးဇင်းအမြင်အရ ပြောရရင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ မကွဲဘဲ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပရဟိတ = အများအကျိုး ဆောင်ရွက်လိုစိတ် ရှိမရှိနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တဲ့ အမြင်ပဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဦးဇင်း တွေ့ရှိထားတဲ့ ဆရာတော်တွေရဲ့ ကာရိုက်တာကို ကြည့်ရင် ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ ဆရာတော်တွေဟာ နိုင်ငံရေးအမြင် ကျယ်စေဦးတော့ သူတို့ဟာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မပါဝင်နိုင်ကြ ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်ရရှိထားတဲ့ ရာထူးလေးတွေ ပျောက်မှာ၊ ကိုယ်ရနေတဲ့ လာဘ်လာဘတွေ ယုတ်လျော့သွားမှာ၊ စတဲ့ အရာတွေ အဆုံးရှုံး မခံနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ပြည်တွင်းက သံဃနာယက ဆရာတော် တစ်ချို့ဆိုရင် ကျောင်းလုပွဲဖြစ်ရင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကြတာတွေ၊ ဗိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ကားပါမစ်တောင်းတာတွေ စတဲ့ အကျင့်ပျက်နေတာတွေ မကြားချင်အဆုံးပါ။ ဒီတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က အကျင့်ပျက်နေတော့
အစိုးရကို မဆန့်ကျင်ရဲတာ မဆန်းတော့ပါဘူး၊ သူတို့တွေဟာ ဗုဒ္ဓအလိုကျ ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြခြင်း မဟုတ်တော့ဘဲ န-အ-ဖ အလိုကျ ကျင့်သုံးနေထိုင်တာတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ပြည်ပက ဆရာတော်ကြီးတွေ အများစုကတော့ ပြည်ပရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ထည့်စဉ်းစားပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းတွေကို အလေးနက်ထားပြီး နိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပရဟိတစိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ် နည်းပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်နဲ့ ဒေါ်လာစိတ်ရှိတဲ့ ရဟန်းအချို့ကတော့ သူများနိုင်ငံရေး လုပ်တာတောင် မကူညီတဲ့အပြင် နှောက်ယှက်တတ်ကြတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဦးဇင်းရဲ့ တစ်ဦးချင်း အမြင်အရပြောရရင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အမြင်ထက် ပရဟိတစိတ်၊ အနစ်နာခံစိတ်ရှိ၊ မရှိ ကွဲပြားမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်လည်း ကွဲပြားသွားတာပါ။
၆။ စစ်အစိုးရကို ကိုယ်တိုင် အသေခံလုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ ဘုရားဟောအတိုင်း အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာ ခံရနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ လုံးဝ မခံရနိုင်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသူများ အဖန်ငါးရာငါးကမ္ဘာ ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားဟောကြားတော်မူထားခြင်း လုံးဝမရှိပါ။ ဈာန်ခဏခဏလျှောကျလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသထွက်ပြီး ကိုယ့်လည်ပင်းကို လှီးဖြတ်တဲ့ အရှင်ဂေါဓိကဟာ မသေခင် ဝေဒနာနုပဿနာရှုပြီး ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ သာဓကတောင် ရှိပါသေးတယ်။
၇။ သပိတ်မှောက်တာနဲ့ ဆန္ဒပြတာ ကွဲပြားအောင် ရှင်းလင်းပေးပါ။
ဖြေ။ သပိတ်မှောက်တယ်ဆိုတာက သံဃာတော်တွေရဲ့ အလုပ်ပါ။ ပတ္တ္တနိကုဇ္ဇန> ပတ္တ္တ-သပိတ်၊ နိကုဇ္ဇန-မှောက်ခြင်း၊ ပတ္တ္တနိကုဇ္ဇ-သပိတ်မှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ ကံတစ်ခု ၀ိနည်းပညတ်တော်မှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီကံ ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းက---
တစ်ခါက ဝုဎလိစ္ဆဝီဆိုတဲ့ မင်းသားတစ်ပါးဟာ အရှင်ဒဗ္ဗဆိုတဲ့ ရဟန္တာမထေရ်တစ်ပါးကို
ပါရာဇိကအာပါတ်နဲ့ စွပ်စွဲဖျက်ဆီးခဲ့မိပါတယ်။ မဟုတ်မမှန်ဘဲ စွပ်စွဲတာမို့ မြတ်စွာဘုရားးက အဲဒီမင်းသားအပေါ် သပ်ိတ်မှောက်ခိုင်းပါတယ်။ သပိတ်မှောက်တယ်ဆိုတာ သံဃာတော်တွေက အဲဒီမင်းသား လှုဒါန်းသမျှ မခံယူတော့ဘဲနေတာ၊ တရားစကား စတာတွေ မဟောကြားတော့တာ စတဲ့ အရာတွေကို ပြုမူဆောင်ရွက် ကြခြင်းပါပဲ။ အဲဒီလို သပိတ်မှောက်နိုင်တဲ့ အင်္ဂါတွေက ရဟန်းသံဃာတွေကို လာဘ်လာဘမရအောင် ပြုလုပ်တာ၊ အကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာ၊ နေမြဲနေရာကျောင်းမှာ မနေနိုင်အောင် လုပ်တာ၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာ၊ ရတနာသုံးပါးရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့စကားတွေ ပြောကြားတာလို့ အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ပါးပါးနဲ့ ငြိရင်ကိုပဲ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်လို့ ရပါတယ်။ ဒါက သပိတ်မှောက်တာနဲ့ စပ်လို့ပါ။ (အခု န-အ-ဖ
အစိုးရက ပခုက္ကူသံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တသုတ် စုပေါင်းရွတ်ဖတ်တာကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သပိတ်မှောက်ဖို့ အခြေခံအချက်နဲ့ ပြည်စုံသွားပါပြီ။ နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ ရိုက်နှက်မှု ဖမ်းဆီးမှု ညဘက် ၀င်ဆီးမှုတွေဟာလည်း သပိတ်မှောက်နိုင်တဲ့ အင်္ဂါ အချက်လက်တွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံနေပါတယ်)
ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကနေ အစုအဖွဲ့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အထိ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ လူသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခွင့် မရှိတဲ့နေရာဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ နေရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ (က) ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း ဈာပနတွင် မည်သူသရဏဂုံ တင်ပေးပါသနည်း။
(ခ) ထိုသံဃာသည် သံဃာ့ကံဆောင်ထားသည့် ကာလဖြစ်သည့်အတွက် ၀ိနည်းနှင့် ညီညွတ် ပါသလော။ မည်မျှ အပြစ်ကြီးပါသနည်း။
(ဂ) ထိုသံဃာကို သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းမှ ကြဉ်သင့် မကြဉ်သင့် မိန့်တော်မူပါဘုရား။
ဖြေ။ (က)၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နံက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဒုံ တပ်မတော် ဆေးရုံကြီးရှိ၊ ငြိမ်းအေးဇရပ်၌ ကျင်းပသော စိုးဝင်း၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်တော်မူကြသည့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့မှ ဆရာတော်များစာရင်း….
(၁) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ညောင်တုန်းမြို့ ပုဏရာမဈေး ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဘိဓဇ မဟာရဌဂုရု အဘိဓဇ
အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓဇောတိက ဘဒ္ဒန္တသြသဓါဘိဝံသ
(၂) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌဆရာတော၊် ပဲခူးတိုင်း(အနောက်ပိုင်း) ပြည်မြို့ ဇောတိကာရုံ ပါဌိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တ္တကုဏ္ဏလဇောတိ
(၃) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌဆရာတော၊် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မိုးမိတ်မြို့ ပုဗ္ဗရုံကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တတေဇ၀န္တ
(၄) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်၊ ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ် ရွာမပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဏိတ ဘဒ္ဒန္တ တိလောကာဘိဝံသ
(၅) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော၊် မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့ ဖာလဇေ တ၀န်ကျောင်း ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ ဂန္တ၀ါစက ပဏ္ဏိတ ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒသီရိ
(၆) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်၊ မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူမြို့ မဟာဝိဇယာရာမ အရှေ့တိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဏိတ ဘဒ္ဒန္တနေမိန္ဒ
(၇) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေါပုံမြို့နယ် ဓမ္မသီတဂူ အေးရွာကျောင်း ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန ၀ိသုတ
(၈) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်၊ မန္တလေးတိုင်း စဉ့်ကိုင်မြို့ ရေချမ်းအိုး ကျောင်း ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန ခေမာဝံသ
(၉) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆရာတော၊် ပဲခူးတိုင်း (အရှေ့ပိုင်း) တောင်ငူမြို့ မြစည်းခုံ စာသင်တိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဏိတ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဏ၀ံသ
(၁၀) နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆရာတော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း မင်းကင်းမြို့ ကန်တော်ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တတိလောက တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(ခ) ၀ိနည်းနှင့် လုံးဝ မညီညွတ်ပါ။ အပြစ်အရပြောလျှင် သာမန် ကုစားရလွယ်သည့် အပြစ် အာပါတ်သာ သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံဆောင်ရဟန်းတော်များကို မထေမဲ့မြင် ပြသည့် သဘောနှင့် လက်ခံနေသည်ဆိုလျှင် ထိုသံဃာသည် ဘုရား၏ အာဏာတော်ကို မထေမဲ့မြင် ပြုရာရောက်ပြီး ဈာန်၊ မဂ်ဖိုလ်တရားများမှ လွဲချော်နိုင်ပါတယ်။ လက်ငင်းအပြစ်အရ မျက်မှောက်ကာလမှာပင် အများသံဃာထုနှင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ကြည်ညိုလေးစားမှု လျှော့ပါးသွားဖွယ်ကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
(ဂ) သံဃာ့ဘောင်မှ မကြဉ်သင့်ပါ။ ကြဉ်လို့လဲ မရပါ။ သို့သော် သံဃရာဇိ = သံဃာတော်များအကြား သီးသန့်အစုအဖွဲ့ တစ်ခုအသွင်နဲ့ တည်ရှိလာနေပြီး သံဃာတော်များအကြား ညီညွတ်မှု ပျက်ပြားစေတဲ့အတွက် (သံဃာအသင်းကွဲစေနိုင်တဲ့ သံဃဘေဒကကံ ထိုက်နိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်) သတိတော့ ထားရမှာ ဖြစ်ကြောင်းသာ ဖြေဆိုပါရစေ။
၉။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အဓိက သ်ိမ်းသွင်းစည်းရုံးနိုင်သူဟာ သံဃာတော်များလို့ မြင်ပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော်များ၏ အမြင်ကို မိန့်တော်မူပေးပါဘုရား။
ဖြေ။ ဦးဇင်းရဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက် အမြင်အရတော့ ဒီအဆိုကို အပြည့်အ၀ မထောက်ခံပါ၊ အကြောင်းကတော့ သံဃာတော်တွေထဲမှာလည်း အချို့က န-အ-ဖ အလိုကျ ကျင့်သုံးပြီး ဗုဒ္ဓအလိုကျ မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထားတဲ့ သံဃာတော်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီသံဃာတွေဟာ အနည်းစုဆိုပေမယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ နေရာတော်တော်များများကို သူတို့ပဲ ရယူထားပါတယ်။ ဒီတော့ သံဃာကလည်း သံဃာ့ဘက်၊ ပြည်သူကလည်း ပြည်သူ့ဘက်၊ စစ်သား တွေကလည်း စစ်သားအသိုင်းအ၀န်းဘက်ထဲ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဘက်တွေမှာ အမှန်ကို သိမြင်ကြပြီး ကိုယ်စီ မိမိသားစုမှသည် အများအတွက် တာဝန်သိ တာဝန်ရှိပြီး ပြုလုပ်သွားကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်။
၁၀။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရမည့်ဘေးမှ ထွက်ပြေး ပုန်းအောင်း တိမ်းရှောင် နေရသော ရဟန်းတော်များသည် ရုပ်ဖျက်ခြင်းအလို့ငှာ လူဝတ်များကို လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်၊ နေ့လွဲညစာများကိုလည်း အမြဲတစေ စောင့်ထိန်းနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအချက်များကို လူတွေ သံသယရှင်းအောင် ဖြေရှင်းပေးပါဘုရား။
ဖြေ။ ရုပ်ဖျက်ဖို့ လူဝတ်လဲရတဲ့ ရဟန်းတွေဟာ မည်သို့မျှ ရဟန်းဘ၀က လျောကျ မသွားပါ။ ရဟန်းဘ၀မှ လူ့ဘ၀ ပြောင်းလဲတဲ့သူဟာ လုံးဝ မကျူးလွန်ရ၊ ကျူးလွန်က လူဖြစ်သွားတဲ့ ပါရာဇိက (၄) ပါးထဲက ၀ိ်နည်းစည်းကမ်းတစ်ပါးပါးကို ဖောက်ဖျက်သူ၊ လူတကယ် ထွက်ချင်လို့ သိက္ခာချတဲ့သူမှ လူတကယ် ဖြစ်တာပါ။ အခြေအနေတစ်ခုအရ ဟန်ဆောင်လိုက်ရတာဟာ လူဖြစ်
နေ့လွဲညစာ စားတယ်ဆိုတာလည်း လူတွေအမြင်အရ အပြစ် (အာပတ်) ကြီးသည်ဟု ထင်နေကြတာပါ။ တကယ့် ၀ိနည်းစည်းကမ်းအရ ရဟန်းတစ်ပါးပါးအထံမှာ ဒီအပြစ် ကျူးလွန် မိပါကြောင်း နောင် စောင့်ထိန်းပါမည်ဟု ပြောဆိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါ အပြစ် (အာပတ်) ပြေပျောက်သွားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အထူးမှတ်ရမှာက မဂွဗြဟ္မစရိယအန္တရာယ် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်အန္တရာယ်၊ ရဟန်းဘ၀အန္တရာယ်)တွေ ပေါ်လာရင်အဲဒီအန္တရာယ်တွေက လွတ်ဖို့ လုပ်ရတာဆိုရင် အပြစ်လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဟု မှတ်ပါ။
၁၁။ သားသုံးသား ဟောကြားပြီး စစ်အစိုးရကို အကြံပေးသော ဘုန်းကြီးသည် သံဃာအဖြစ် ဆက်လက် ဖြစ်ပါသလား။
ဖြေ။ လုံးဝ ဘုန်းကြီးသံဃာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ မှတ်ယူနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ရဟန်းတော်များ
ကျူးလွန်ရင် လူဖြစ်တဲ့ အပြစ်တွေထဲမှာ နံပါတ်(၃)အပြစ်က လူသတ်မှုပါ။ လူသတ်မှုကို ကိုယ်တိုင် ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်ခြင်း (သို့) သူတစ်ပါးကို ကျူးလွန်ဖို့ရန် တိုက်တွန်း စေခိုင်းပြီး အခိုင်းခံရသူကလည်း ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်ခြင်း အဖြစ်ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ထိုရဟန်းမှာ လူ့အဖြစ် ရောက်သွားပါတယ်၊ ထို့ကြောင့် ထိုအသံဖိုင်ပိုင်ရှင် ဘုန်းကြီးသည် ရဟန်းသံဃာ လုံးဝ မဟုတ်နိုင်တော့ပါ။ အောက်ပါ မှတ်ချက်ကို http://www.lanka-msma.co.cc မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
(ဘုရားပေးသောဆွမ်း စသည့်ပစ္စည်းလေးပါးကို စားသုံးပြီး ထိုဆရာတော်သည် သံဃာကို သတ်ဖြတ်ရန် မိန့်ကြားခဲ့၏။ သံဃာတော်များကို သံဃာအတုဟုလည်း စွပ်စွဲခဲ့၏။ အလွန်ပင် အံ့သြစရာကောင်းပေစွာတကား။
ထိုသို့ သံဃာတော်များကို သတ်ဖြတ်စေခြင်း၊ စွပ်စွဲခြင်းကို ပြုလုပ်သော ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သံဃာအစစ် ဟုတ်၏လောဟု စဉ်းစားဖွယ်ပင် ဖြစ်၏။
တတိယပါရာဇိကအရလည်း အာဏတ္တိက=စေခိုင်းခြင်း၊ သတ်ဖို့ရန်အတွက် စေခိုင်းခြင်းကြောင့် ပါရာဇိကကျကြောင်း ၀ိနည်းဒေသနာတော်၌ ဘုရားရှင် ဟောကြားထား၏။ အပြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ သံဃာသည် လူ့အသက်ကို သတ်ရန်စေခိုင်းလျှင် ပါရာဇိကကျ၏။ အယုတ်ဆုံးအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ကျဆေးပေးလျှင်ပင် ပါရာဇိကကျ၏။ ပါရာဇိကကျခြင်း ဟူသည်မှာ ရဟန်းကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ ကံပြုခြင်း အခွင့်ထူးကို မရတော့ပေ။ ရဟန်းမဟုတ်တော့ပေ။ လူသာဖြစ်၏။ သင်္ကန်းဝတ်ထားသော်လည်း သင်္ကန်းအရေခြုံထားသော လူသာဖြစ်၏။ သာသနာတော်တွင် ပါရာဇိကသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်၏။ ပါရာဇိကကျလျှင် သာသနာတော်အတွင်း ရဟန်းအဖြစ် နေခွင့်မရှိတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် သံဃာတစ်ပါးဖြစ်လျက် သံဃာတော်များကို သတ်ရန် မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်ဆောင် သာသနာဖျက် သြ၀ါဒကထာကို မိန့်ကြားခဲ့သော ထိုဆရာတော်သည် စဉ်းစားစရာဖြစ်၏။ အသင်စာဖတ်သူသည်လည်း မည်ကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမည်နည်း။)
(အသိပေးပန်ကြားချက်) အထူးသတိပေးလိုသည်မှာ တကယ့်အစစ်အမှန် အသံဖိုင်ပိုင်ရှင်ဟု မသေချာပါက ၀ိနည်းတော်အရပဲအဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် အပြစ်တင် မစောစေလိုပါ။ တကယ်စစ်မှန်ပါကလည်း သူ့ထိုက်နှင့် သူ့ကံ သွားပါလိမ့်မည်။ မိမိတို့ ပစ်မှတ်မှာ ဦးသန်းရွှေလည်း မဟုတ်၊ ကြခတ်ဝိုင်းဆရာတော်လည်း မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးသာ ဖြစ်သည်ကို သတိပြုမိဖို့ လိုပါသည်။
၁၂။ တပြည့်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက သိခဲ့ရတဲ့ သိကြားမင်းဆိုတာ တကယ်ပဲ ရှိပါရဲ့လား ဘုရား။ ဘာ့ကြောင့် သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်လျက်ရှိတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေ ဒုနဲ့ ဒေး ဒုက္ခရောက်နေတာလဲဘုရား။
ဖြေ။ သိကြာမင်းကတော့ တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါက အင်းဝနေပြည်တော်မှာ ရဟန်းသံဃာ များစွာကို စာပေပို့ချနေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး ရှိပါတယ်။ အဲဒီဆရာတော်က မည်မျှပင် လာဘ် လာဘ မရရှိဘဲ နေပါစေ စာပေပို့ချမှု သာသနာ့တာဝန်ကို မပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အင်းဝမင်းက ဘာစာပေမှ မပို့ချပဲ နေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးကိုသာ ပစ္စည်းလေးပါး လှူဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ စာပေပို့နေတဲ့ ဆရာတော်က ညသန်းခေါင်ယံ ထပြီး တုံးမောင်းတွေ အဆက်မပြတ် ထုခတ်ပါတော့တယ်။ မင်းချင်းတွေက လာပြီး ဘာ့ကြောင့် တုံးမောင်းထုခတ်ရတာလဲလို့ မေးလျှောက်တဲ့အခါ သိကြားမင်း သေသွားလို့ ထုခတ်တာ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်လိုက်ပါတယ်။ သိကြားမင်း သေတာ ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲလို့ ထပ်မေးလျှောက်တဲ့အခါ သိကြားမင်းက သာသနာကို ဘုရားရှင် မရှိတဲ့နောက်ပိုင်း စောင့်ရှောက်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ။ အခု စာပေပို့ချ သင်ယူနေတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ ဆင်းရဲနေတာကို မြင်လျက်နဲ့ မစောင့်ရှောက်တာဟာ သိကြားမင်း သေသွားလို့ပဲ မဟုတ်လားလို့ ပြန်မိန့်တော်မူသတဲ့။
အခုလဲ မြန်မာပြည်မှာ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်းတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ် နေတာတွေကို သိကြားမင်းအနေနဲ့ မပိတ်ပင် မကူညီတာကို ထောက်ရင် ဦးဇင်းအထင် သိကြားမင်း သေသွားပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
၁၃။ သံဃာဂိုဏ်းခွဲရင် ဘယ်လိုဒဏ်တွေ ခံရပါသလဲ။
ဖြေ။ သံဃာဂိုဏ်းခွဲရင် ပဉ္စာနန္တရိယကံထဲ ပါဝင်တာမို့ ပဉ္စာနန္တရိယကံအတိုင်း နောက်ဘ၀ကျရင် မဖြစ်မနေ ဧကန်မုချ ဆိုးကျိုးခံစားရမှာပါ။ သံဃာသင်းခွဲမှုဆိုတာ ရဟန်းသံဃာတော်များ တစ်သိမ်တည်းမှာ ကံကြီးကံငယ် တစ်ပြိုင်နက် ခွဲခြားပြုမှ သံဃဘေဒကကံဖြစ်တာပါ။ သံဃာတော်များအား ကွဲစေရန် အားထုတ်မှုကြောင့် သံဃဘေဒကကံနီးပါး အပြစ်ကြီးပါတယ်။ မေးခွန်းကို ကြည့်ဖြေရရင် သံဃဘေဒကကံရဲ့ အပြစ်က အ၀ီစိငရဲမှာ အ၀ီစိငရဲ သက်တမ်းနဲ့အည်ီ (အာယုကပ်ပတ်လုံး) ခံစားရပါတယ်။ ပဉ္စာနန္တရိယ ကံငါးပါးမှာ သံဃဘေဒကကံက အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်းပါ။ (စာကိုး=သဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာ)
၁၄။ ဓား ဓားချင်း၊ လှံ လှံချင်း တုံ့ပြန်ရမည်၊ အပြတ်ရှင်းရမည်ဆိုသော ကြခတ်ဝိုင်း ဘုန်းကြီးသည် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဘွဲ့တော်နှင့် ထိုက်တန်ပါသလား၊ အ၀ီစိသို့ ကျနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ကြခတ်ဝိုင်းဘုန်းကြီးသည် ထိုအသံဖိုင်ပိုင်ရှင် အမှန်တကယ် စစ်မှန်ပါက အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌ ဘွဲ့နှင့် မထိုက်တန်ပါ၊ န-အ-ဖ က ပေးသော ဘွဲ့ဖြစ်၍ အဘိဓဇ န-အ-ဖ ဂုရုဘွဲ့နှင့်သာ ထိုက်တန်ပါသည်၊ အ၀ီစိသို့ ဧကန်မုချ ကျ၊ မကျကား ၄င်းဘုန်းကြီး၏ အကုသိုလ်ကံ အကြီးအသေးက အဆုံး အဖြတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
၁၅။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဘာဖြစ်လို့ ထားရသလဲ။
ဖြေ။ ဒီမေးခွန်းကိုတော့ ယခုလက်ရှိ သက်ရောက်မှုနဲ့ပဲ ဖြေပါ့မယ်။ သာသနာရေးအမှုအခင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရင် ဝေစုရအောင် ခွဲတမ်းချယူမယ်၊ ပြည်ပဘုရားဖူး စီးပွားရေးလုပ်မယ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ဗုဒ္ဓဘာသားတွေက လှူတာကို မောင်ပိုင်စီးလုပ်မယ်။ (စကားမစပ်- ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ညီလာခံတုန်းက ဂျပန်က လှူထားတဲ့ ကားတွေတောင် ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိ၊ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် မရှိတော့ပါ) တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေရဲ့ ဌာပနာတွေဖောက်ပြီး သိမ်းဆည်းမယ်။ ပြည်သူတွေကို ဘာသာရေးပွဲတွေ ဗန်းပြပြီး အလှူခံစားမယ်။ အခြားမွတ်စလင်၊ခရစ်ယာန်စတဲ့ ဘာသာတွေဆီက ပေးလာတဲ့ လာဘ်ထိုးမှုတွေကို လက်ခံပြီး ကိုယ့်မိသားစု ချမ်းသာရေး လုပ်မယ်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့တွေမှာ နှစ်စဉ်ကပ်တဲ့ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တွေအတွက် ဘွဲ့လိုချင်တဲ့ ရဟန်းတွေ လူတွေဆီက ဘယ်ဘွဲ့ ဘယ်နှစ်သ်ိန်းပေးဆိုပြီး တောင်းမယ်။ အချုပ်ပြောရရင်တော့ အံ့မောင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ န-အ-ဖ အလိုတော်ရိတွေအတွက် စားကျက် သက်သက်အဖြစ် ဖန်တီးပေးထားကြောင်းပါပဲ။
၁၆။ ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီး သီလမပေး အမျှ မပေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲဘုရား။
ဖြေ။ ဒီမေးခွန်းဟာ ဟို... ကိစ္စကိုရည်ရွယ်ပြီး မေးတာထင်ပါတယ်။ ပေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိမှ ပေးလို့ရမှာပေါ့။ သီလဆိုတာ ပေးလို့ရတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါ။ ကုသိုလ်စိတ်၊ တာဝန်သိစိတ် ရှိရင်တော့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေ လျှောက်ထားတောင်းဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထုံးစံအတိုင်း ပြန်လည် ချီးမြောက်သင့်ပါတယ်။ အခုကိစ္စကတော မြန်မာ့အရေး မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နှင့် ပတ်သက်နေတော့ န-အ-ဖ အလိုရိဆိုလျှင် ပြည်သူ့မျက်နှာ ကြည့်ချင်မှ ကြည့်မှာပေါ့။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှ မရှိဘဲ နေတာကတော့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေ လှူတာကို ခံယူပြီး ပြန်လည် ချီးမြှောက်သင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓစကားမိန့်မှာချက်ကို တာဝန်မကျေဘူးလို့ဘဲ သတ်မှတ် ရပါလိမ့်မယ်။ တာဝန်မကျေရင်တော့ ကြာရင် အကြွေးထူပြီး ကြွေးယူစားသုံးသူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာပါပဲ။
၁၇။ မြန်မာပြည်မှာ န-အ-ဖ ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါသလားဘုရား၊ ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်သင့်ပါသလဲ။
ဖြေ။ သာသနံ နာမ ရာဇပဓာနံ လို့ဆိုထားတာမို့ န-အ-ဖ ကြောင့် ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လုပ်သင့်တာတော့ န-အ-ဖဟာ သာသနာကို လိုသလို ခုတုံးလုပ် အသုံးချနေတာမို့ သူတို့ကို အပြုတ်ဖြုတ်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ သာသနာကို တိုးတက်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီယားစတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ အရင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမယ့် မင်း အပြောင်းလဲတွေကြောင့် အခုဆိုရင် ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပါပြီ။ ဒီသာဓကတွေကို သင်္ခန်းစာယူပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအရေခြုံပြီး လုပ်စားနေတာကို တိုက်ဖျက်ပြီး ဘာသာသာသနာ၊ နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တောင်မြို့ဆရာတော်ကြီး မိန့်တော်မူခဲ့တဲံ့ သံကိုဖျက်တာ သံချေး၊ ဘာသာကို ဖျက်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်နာမည်ခံ န-အ-ဖ လူတွေနဲ့ မင်းဆရာတွေပါပဲလို့ ပြောရပါတော့မယ်။
၁၈။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ အမြင်မှန်ရအောင် မည်သို့ ကြိုးပမ်းသင့်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ဒီပြဿနာက အရေးကြီးပါတယ်။ မ-ဟ-န အဖွဲ့အစည်းဟာ ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ သံဃာတွေအတွက် ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပေမယ့် န-အ-ဖအတွက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဓမ္မစက်ကို အလွဲသုံးစား သုံးပြီး န-အ-ဖ က အာဏာစက်သုံးနေကြတာမို့ ၀မ်းတူးရိုက်နေကြတဲ့ အခြေအနေပါ။ အဲဒီ မ-ဟ-န နဲ့ န-အ-ဖ အကြားက ကွင်းဆက်ကို ဖျက်ဖို့ မ-ဟ-န ဆရာတော်ကြီးတွေဟာ အမြင်ကျယ်ဖို့၊ အမြင်ကျယ်သလို လာဘ်လာဘနောက် မလိုက်ဘဲ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေ ကိုးစားရတဲ့ ဆရာတော်တွေ ဖြစ်ဖို့၊ ပေါ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၁၉။ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများ ကိုးကွယ်သော သာသနာရေးမှ ဆရာတော်ကြီးများနှင့် ပြည်သူများ (သာမန်လူတန်းစားများက) ကိုးကွယ်သော သံဃာတော်များ၏ နိုင်ငံချစ်စိတ၊ လူမျိုးချစ်စိတ် ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ် တူညီမှု ရှိပါသလား။ (မည်သို့ ကွာဟပါသနည်း)
ဖြေ။ မျိုးချစ်စိတ်ကတော့ သိပ်မထူးပါ၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရကိုးကွယ်သော ဆရာတော်ကြီးများတွင် အများစုမှာ နီးရာဓား ကြောက်နေကြပုံပါ။ နောက်တစ်ခုက ပုထုဇဉ်အမိုက်သားတွေပီပီ ရာထူး၊ လာဘ်လာဘများကို မစွန့်လွှတ်နိုင်မှုကို အခြေခံကြရာမှ အမျိုးသားရေးအတွက်ပါ အနစ်နာ မခံနိုင်တဲ့အဖြစ်ကို ရောက်နေကြပုံ ပေါ်ပါတယ်။ အများအကျိုးဆောင်ရွက်မှု ဆိုသည်မှာ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံရဲသည့် အာဇာနည်စိတ်ရှိသူများသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
၂၀။ အရှင်ဘုရား မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာရှိသော သံဃာ့ဆရာတော်ကြီး အချို့မှာ န-အ-ဖ က ဆက်ကပ်လှူဒါန်းသော လှူဖွယ်ပစည်းများကို လက်ခံနေပါသလဲ။ ဒီလို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ပတ္တ္တနိကုဇ္ဇနကံဆောင်ခြင်းကို ဘယ်လို ထိခိုက်နိုင်ပါသလဲ၊ သံဃာသင်းခွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုသလို ဖြစ်နေပါသလား။ တပည့်တော် နားလည်သလောက် သပိတ်မှောက် ကံဆောင်တာဟာ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြစရာ မလိုပဲ ပြုလုပ် လို့ရတာမို့ ဒီဆရာတော်ကြီးတွေဟာ အဖမ်းခံရ အချုပ်ခံရမှာလည်း ကြောက်စရာ မလိုဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ လက်ခံတဲ့ သံဃာဟာ အပြစ်ရှိပါသလား။
ဖြေ။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လက်ခံနေမှန်း အတိအကျ မသိပါ။ နီးရာ ဓားဆိုတာထက် နီးရာသေနတ် ကြောက်နေပုံရပါသည်။ ပတ္တ္တနိကုဇ္ဇနကံကို မထိခိုက်နိုင်ဟု ထင်ပါတယ်။ (မထိခိုက်နိုင်ဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓ၏ အာဏာစက်ကို မည်သို့မျှ မထိခိုက်ခြင်း၊ ပတ္တ္တနိကုဇ္ဇနကံ မပျက်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။) သို့သော် လူမိုက်အားပေးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို သူတို့ သံဃာဟု လက်ခံလျှင်၊ သံဃာ့ဆန္ဒ ဘုရားတောင် မလွန်ဆန်ခဲ့တာကို သိလျှင် အလှူမခံသင့်ဟု ယူဆပါတယ်။ လက်ခံတဲ့ သံဃာဟာ အပြစ်ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဈာန်မဂ်ဖိုလ် ရကြောင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အာပါတ်(ဒုက္ကဋ်)မှသည် သံဃာအများစုရဲ့ ငြိုငြင်မှုကို ခံရပါတယ်။
၂၁။ ကြခတ်ဝိုင်းဆရာတော် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဆရာတော် အစရှိသည့် န-အ-ဖ သံဃာတော်များကို စိတ်ထဲမှ ပစ်မှားမိပါသည်၊ ငရဲကြီးနိုင်ပါသလားခင်ဗျား။
ဖြေ။ ပြစ်မှားတယ်ဆိုကတည်းက အကုသိုလ်မို့ ကိုယ့်မှာ နေရင်ထိုင်ရင်း မစားရ မသောက်ရ အကုသိုလ် ဖြစ်နေကြရပါတယ်။ ကိုယ်က စဉ်းစားရမှာက သူတို့ကို ပြစ်မှားလိုက်ရလို့ ကိုယ့်မှာအရှုံးပေါ်သွားရင် မတန်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အသံဖိုင်ပိုင်ရှင် အစစ်မှန်ဟာ ကြခတ်ဆရာတော် မဟုတ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်အတွက် အများကြီး နစ်နာပါတယ်။ စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်လည်း သင်္ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက် နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ ဆိုတာကိုပဲ အလေးထားစဉ်းစားကြရင် ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ နောက်လည်း ဒီလိုလူတွေ ပေါ်လာဦးမှာဆိုတော့ နောက်တစ်ခါ တော်လှန်ရေးမှာ ကိုယ့်ဘက်က ဟာကွက်မရှိ ပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့။
ငရဲကြီး၊ မကြီးကတော့ ကိုယ်ပြစ်မှားမိသူက သီလပြည့်စုံသူဖြစ်ရင် အပြစ်ဖြစ်နိုင်တာမို့ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး ရှေ့ဆက်ဘာဆက်လုပ် မလဲဆိုတာပဲ တွေးစေလိုပါတယ်။
(မူလရွှေကျင်ဂိုဏ်းဆရာတော်သည် မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မင်းသားငယ်များ တော်လှန်သည့်အရေးတွင် သံဃာတော်အချို့ ဖမ်းဆီးခံရသည့် အရေးအတွက် သံဃာတော်များဘက်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး မင်းတရားကြီး အပါယ်မလားရေးကို လမ်းညွှန်ဆုံးမခဲ့သလို ဆရာ့ခြေရာကို ဆရာကောင်းတပည့်ပီပီ ရဲဝံ့စွာကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။)
၂၂။ အကြောက်တရားများကို ချေဖျက်ဖို့ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဗုဒ္ဓဟောပြောချက်များ သဘောတရားများကို Detail သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ အကြောက်တရားဆိုတာ ပါဠိလို ဒေါသအကုသိုလ်စေတသိက်ရဲ့ သဘောသင်္ကေတပါပဲ။ ဒီဒေါသကို ချေဖျက်နိုင်စွမ်းသူဟာ အာသဝေါကုန်းခန်းတဲ့ ရဟန္တာနဲ့ အနာဂါမ်အရိယာတွေသာ ရှိတာပါ။ အကြောက်တရား ချေဖျက်နိုင်တဲ့တရား ဆိုရင်တော့ ၀ိပဿနာပွားနေကြရုံပါ။ ဒကာရဲထက် မေးတာက မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လောကီအရေးအနေနဲ့ မေးတာမို့ ဦးဇင်း အမြင်အရ အကြောက်တရားပြေစေတဲ့ စကားတစ်ခွန်ကို ပြောရရင် သဒ္ဓါယ တရတို ဩဃံ = ယုံကြည်မှုနဲ့ အခက်အခဲ သံသရာဝဲဩဃကို ကျော်လွှားနိုင်တယ် (သံယုတ်ပါဠိ)ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့်ရှိပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် မိန့်တော်မူခဲ့တာပါ။
ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူဟာ ဘယ်အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် တွန့်ဆုတ်ခြင်းအလျဉ်းမရှိဘဲ ရှေ့ကိုသာ ရောက်အောင်လျှောက်မြဲပါ။ ပြီးတော့ သူ့အလုပ် မအောင်မြင်ဘူး ဆိုရင်လည်း တစ်ကြိမ် တစ်ခါတည်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျမသွားပါဘူး။ အလောင်းတော်သုမေဓာရဲ့ ဘုရားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု၊ သမ္မတလင်ကွန်းရဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရမှုတွေကို နင်းတက်ပြီး သမ္မတရာထူး ရယူခဲ့နိုင်တဲ့ ယုံကြည်မှု၊ မဟတ္တမဂန္ဓီရဲ့ ယုံကြည်မှု၊ မာသာထရီဇာရဲ့ ယုံကြည်မှုမှသည် နောက်ဆုံး ဟစ်တလာရဲ့ ယုံကြည်မှုထိ အားလုံးသော ယုံကြည်မှုတွေဟာ အကြောက်တရားကို အနည်းနဲ့အများ အကာအကွယ် ပေးသွားတာပါပဲ။ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို ဘယ်အဆောက်အဦမှာ တည်ဆောက်ထားတာလဲ။ ဒါပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ တော်သင့်မှန်ကန်တဲ့ အပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားရင် သမ္မတလင်ကွန်းလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လို နာမည်ကောင်း ကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ်သလို၊ မမှန်ကန်တဲ့ အပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားရင်တော့ ဟစ်တလာလို ပိုပေါ့စ်လို ဘင်လာဒင်လို န-အ-ဖ လို နာမည်ဆိုးနဲ့ သမိုင်း ရိုင်း ကျန်ခဲ့ရမှာပေါ့။ တစ်ခုရှိတာက သဒ္ဓါဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ တော်သင့်မှန်ကန်တဲ့ နေရာမှာ ယုံကြည်မှုဖြစ်မှ သဒ္ဓါတရားလို့ ဆိုလို့ရတာပါ။ န-အ-ဖ တို့၊ ဘင်လာဒင်တို့ အုပ်စုတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကတော့ သဒ္ဓါမဟုတ်ဘဲ မိစ္ဆာဓိမောက္ခ = မှားမှားယွင်းယွင်း ယုံကြည်သက်ဝင်မှုသာ ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သဒ္ဓါဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွပြီး စိတ်ကို ကြည်လင်စေပါတယ်။ အခု ဦးသန်းရွှေတို့ ခမျာတော့ အတွင်းမှာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုရမှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ မောဟ (အမှား အမှန်မသိမှု)၊ ဒိဌိ (မှားယွင်းစွာ ရှုမြင်မှု) တရားတွေ ဦးစီးတဲ့ အကုသိုလ်တရားတွေ ၀န်းရံနေပါတယ်။
ဒီတော့ ဦးဇင်းရဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်အမြင်အရ ပြောရရင် အကြောက်တရားကို ချေဖျက်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော တရားဟာ ယုံကြည်မှုပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေဆိုလိုက်ရပါတယ်။
(ဒီလိုဖြေဆိုလိုက်ရတဲ့ ကုသိုလ်စေတနာကြောင့် မေးသူ၊ ဖြေသူ၊ ပွဲကျင်းပသူ အားလုံး ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းဝေးတဲ့ နေရာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းဝေးတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ အမြန် ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ)
Posted by Niknayman at 6:21 AM